jrefrmEdkifiHESifh tifwmeufuGefeuf&Sif (2)
Thread: [mm]jrefrmEdkifiHESifh tifwmeufuGefeuf&Sif (2)[/mm]
03-18-2012 04:08 AM #1
jrefrmEdkifiHESifh tifwmeufuGefeuf&Sif ydkpfh (1000) jynfhoGm;vdkY topfzGifhvdkufygw,f.../
honelay86, jackknife, ko too, ktg, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, Nsaboy, painpainlay, parkye, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zero6
03-18-2012 04:07 PM #2
Thanked 41,251 Times in 2,056 Posts
သရက်အသစ်လေးမှာ သူများ ကွန်နက်ရှင် ကြွားလိုက်ဦးမယ်...
ကျွန်တော့်သယ်ချင်း ထိုင်ဝမ်က ကောင်ရဲ့ အင်တာနက်ပါ
ဒါတောင် ကြိုးနဲ့ ချိတ်တာ ကြိုးရဲ့ လစ်မစ်ကြောင့် အဲ့လောက်ပဲ ရတာပါတဲ့
အဲ့လို အင်တာနက်မျိုး ဘယ်တော့များမှ သုံးရမလဲ မသိဘူး
akm, BH, domeno, fergusan, galladino, gunNrose, honelay86, htinlinn, jackknife, ko too, koluchaw, ktg, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, nijinsky, nlsoe1974, Nsaboy, painpainlay, parkye, Peacock D. NgaPyae, Perigee, skyblue199, staraye, thudawzingyi, yankanar, yokesoe, zero6
03-19-2012 07:12 AM #3
Thanked 103 Times in9Posts
အခုတလော အင်တာနက်ကွန်နယ်ရှင်များ လွန်စွာကျနေပါတယ်။ MPT လိုင်းနဲ့ pfingo ခေါ်လို့ရတဲ့ proxy များသိရင် ရှယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
akm, arshay, fergusan, galladino, honelay86, htinlinn, ko too, ktg, mahawgani, MegaPower, mgmgthan, MGW, MNO.BN, myanmargunner, Nsaboy, painpainlay, Perigee, skyblue199, staraye, yankanar, yokesoe
03-19-2012 05:10 PM #4
Noble Contributor Godly Cupid Moving Forward
Thanked 51,936 Times in 3,365 Posts
Originally Posted by talkyboy
'DoDcsif;yJ qdkvdkufawmhr,f/ arQmfawmfa&mif arQmfawmfa&mif .. arQmfawmfa&mif b0u vTwfcsifNyD/
akm, arshay, fergusan, galladino, GuruAM, honelay86, htinlinn, justkidding, ko too, ktg, mahawgani, MegaPower, mgmgthan, MNO.BN, Ni Maung, Nsaboy, Perigee, staraye, talkyboy, yankanar, yokesoe
03-23-2012 05:37 PM #5
usaemhrSm t&ifu ADSL vdkif;wpfvdkif;&Sdygw,f. tJh'gudk tdrfaNymif;vdkU aNymif;zdkUwifwm aNymif;vdkUr&bl; tdwfcsdef;rSm bmr&SdvdkUvJ rodbl; tJh'gaNymygw,f. aewmu omauwbufrSm Nzpfygw,f. ADSL vdkif;u t&iftdrfzkef;rSm usefcJhw,f tJh'gb,fvdkrsm;vkyf&if&EdkifrvJ As.
aemuf omauwbufrSm b,fvdk tifwmeuftrsdK;tpm;tqifaNyrvJcifAs. tcku pD'Dtrfatu [mav;oHk;aewm tqifraNyvdkU
adaptor, akm, fergusan, galladino, GuruAM, honelay86, htinlinn, JoeJoule, justkidding, ko too, ktg, MegaPower, MNO.BN, myanmargunner, skyblue199, staraye, yankanar, yokesoe
03-23-2012 08:25 PM #6
tif;... avmurSm tajz&cufqkH;ar;cGef;xJrSm .... wpfckygw,f...
jrefrmEkdifiHrSm b,ftifwmeufuGefeuf&Sif ,l&ifaumif;rvJ qkdwJh ar;cGef;yg.. awmfawmfajz&cufw,f...
a&G;cs,fp&m tifwmeufuGefeuf&SifawGu rsm;ayr,fh... b,fwpfckrS tmrcHcsufr&Sdbl;...
NyD;cJhwJh2ywfavmufu &kH;rSm uGefeuf&SifawGt&rf;aES;wmaMumifh WiMax 0,frvkdY Akdvfatmifausmfvrf;xdyfu BAK tay yfu RedLink udkoGm;w,f.. prf;okH;Munfhwm.. olwkdYqDrSmudk Google wufzkdYtawmfMumaew,f.. nslookup ac:Munfhwm.. request time out eJY wkd;w,f..
aumif;a&m..'geJY r0,fyJ jyefvmcJhw,f... NyD;cJhwJhwpfywfu McWill 0,fzkdYoGm;Munfhw,f.. tay:utwkdif;yJ... page wpfckwufzkdY tawmfukd apmihf&w,f... qkdifuaumifrav;awGuawmh twif;ra&mif;&Smygbl;... uGefeuf&Sifraumif;wmudkawmh uRefrwkdYbufu bmrS vkyfay;vkdYr&ygbl;wJh... olwdkYu LSP jzpfygw,f... uGefeuf&Sifraumif;wmuawmh ISP eJYyJqkdifwmygwJh... olwdkYu a&mif;ay;&kH oufoufygwJh..
aemufqkH;awmh c&D;oGm;&ifvJ ,loGm;vkdY&wJh... okH;oavmufom rdepfvkduf okH;pGJcjzwfwJh McWill 1M plan udk ukd,fh'kwfcukd,f &SmzkdY aiG7odef;ausmfeJY 0,fjzpfcJhaMumif;...
akm, BH, devilgrin89, fergusan, galladino, GuruAM, honelay86, htinlinn, jackknife, JoeJoule, justkidding, Kaung Lay Luck, Ko Khant, ko too, ktg, mahawgani, MegaPower, MNO.BN, Nsaboy, Perigee, skyblue199, staraye, THARGYII, yankanar, yokesoe
03-24-2012 02:44 AM #7
Thanked 620 Times in 62 Posts
သာကေတ Exchange မှာ DSLAM မရှိဘူးကြားတယ် ကို Nsaboy ရေ. ကျွန်တော်တို့ ရုံးတစ်ရုံးလည်း ရွှေပုဇွန်ရှေ့က မြမာလာလမ်းထဲမှာရှိတယ် အဲဒီမှာ ADSL လျှောက်မလို့ မေးကြည့်တာ တပ်လို့ မရဘူးဆိုလို့RedLink WiMAX Outdoor ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက တပ်သုံးနေတာ အခုထိ ပဲ ဒါပေမယ့် Outdoor Plan တွေက 512Kbps အထိပဲ အမြင့်ဆုံးရလို့အခုနောက်ပိုင်း RedLink က Indoor Units နဲ့အနည်းဆုံး 512Kbps က အမြင့်ဆုံး 3Mbps ထိ ရလို့စုံးစမ်းကြည့်တော့ သာကေတ၊ ဒေါ်ပုံက Indoor Unit နဲ့မရဘူးလို့ ပြောတယ် ပထမတော့ SKYNET ကို ၀ယ်တပ်မလို့ စုံးစမ်းကြည့်တော့ သူ့Package ထဲမှာ VoIP တို့IPTV တွေက မဖြစ်မနေအတင်းယူခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးထည့်ထားတော့ တွက်ကြည့်လိုက်တာ အနိမ့်ဆုံး Plan တောင် ၁၃ သိန်းနီးပါးကျမယ် နောက်ပြီး Outdoor ဘန်းတွေ LNB တွေ Cable တွေ Indoor Consumber Box တွေနဲ့ ဆိုတော့ ထိန်းသိမ်းရမယ့် တာဝန်က တော်တော်လေးပိုတယ် နောက်ပြီး သူက IPStar ပဲဆိုတော့ မိုးအုံ့ တာတို့တိမ်ထူတာဆိုရင် သုံးလို့ က သိပ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက RedLink Indoor Unit 512Kbps Silver Plan နဲ့ သွားစမ်းကြည့်တာ WiMAX Signal က ဘား နှစ်တုံးလောက်ရတယ် သုံးကြည့်တော့လည်း စက်သုံးလေးလုံးလောက်ကတော့ အေးဆေးပဲ အဲဒါနဲ့ အခုတော့ RedLink က Indoor Units လေးနဲ့အဆင်ပြေနေတယ် ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း တခါတလေကျရင် DNS ဒေါင်းသွားတာတို့ဘာတို့ ဆိုရင်တော့ မရဘူးပေါ့ နောက်ပြီး ကိုယ်ယူထားတဲ့ Plan Usage Quota ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာ www.redlinkcare.net.mm မှာလဲ သွားကြည့်လို့ ရတော့ ချိန်သုံးလို့ ရတယ်လေ တခုတော့ရှိတယ်နော် အဲဒီ Site ကို Redlink ကွန်နဲ့ ပဲ သွားဝင်စစ်ကြည့်လို့ရတယ် ကျန်တဲ့ Yatanarpon တို့MPT ကွန်တို့ နဲ့သွားစစ်လို့ မရဘူး DNS Server မတူလို့ အခု RedLink WiMAX DNS တွေက 10.10.10.10 , 10.10.10.11 နဲ့ သွားတာ ကျွန်တော်က RedLink က ၀န်ထမ်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး Promotion လုပ်ပေးနေတာလည်း မဟုတ်ဘူးနော် အတွေ့ အကြုံလေးတွေ ပြန်ဝေမျှတဲ့သဘောပါ
Last edited by htinlinn; 03-24-2012 at 02:50 AM.
adaptor, BH, devilgrin89, fergusan, galladino, honelay86, jackknife, JoeJoule, justkidding, Kaung Lay Luck, ko too, ktg, mahawgani, MegaPower, MNO.BN, nijinsky, Nsaboy, Peacock D. NgaPyae, Perigee, skyblue199, staraye, talltar, THARGYII, THIHA, thudawzingyi, yankanar, yokesoe
03-24-2012 05:04 PM #8
Thanked 931 Times in 114 Posts
usaemfu A[ef;rSm tifwmeuf wyfrvkd Y ygcifAsm/ pOf;pm;xm;wmuawmY Fiber Optic တတ်မယ်လို့  မှန်းထားပါတယ်။ ဘယ်လို နေလဲ ဗျာ။ အခု လက်ရှိ ဖိုင်ဘာ သုံးနေတဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေပါသလားသိချင်လို့  ပါ။ ကျေးဇူးနော်။
akm, galladino, honelay86, htinlinn, JoeJoule, justkidding, Ko Khant, ko too, ktg, MegaPower, MNO.BN, vnomous, yankanar, yokesoe
03-25-2012 04:20 AM #9
Thanked 5,827 Times in 355 Posts
ဖိုင်ဘာာာာာာာာာာ ဘယ်တော့မှမ၀ယ်ပါနဲ့ ဒေါင်းလုပ်စပိ 1/kbs နှုန်းနဲ့တက်နေရာကနေ အခုဆို ၀က်ပေ့ခ်ျပါမတက်တော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ ဆီလာတပ်ပေးတုံးက ပြောတော့ ဒီနေ့ ကော်နက်ရှင် နည်းနည်းလေးပါလိမ့်မယ် မနက်ဖြန်ညနေလောက်ကစပြီးပြန်ကောင်းပါပြီလို့ပြော ပါတယ် ဒါပေမယ့် အခု နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်ထဲရောက်နေပါတယ် ၁ကေဘီအက်စ် ကနေမတက်ပါဘူး ကွန်ပလိန်းတက်တော့လဲသူတို့ဆီကဖြစ်တာမဟုတ်ပါကြော င်း ရတနာပုံက ဖြစ်တာပါဆိုတဲ့အကြောင်းချည်း အာမခံရဲရဲနဲ့ ရှင်းပြပါတယ် အဲဒီတော့ ခုလက်ရှိမှာ မ၀ယ်သေးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ
၀ိုင်မက်စ် ၃ မက် လိုင်းလေးကတော့ မဆိုးပါဘူး ခင်ဗျားးးး....
akm, galladino, honelay86, htinlinn, JoeJoule, ko too, ktg, mahawgani, MegaPower, MNO.BN, nemesis2011, talltar, thudawzingyi, vnomous, yankanar, yokesoe
03-25-2012 06:35 AM #10
Thant Sin Htet
Thanked 19,433 Times in 1,465 Posts
Originally Posted by htinlinn
သာကေတ Exchange မှာ DSLAM မရှိဘူးကြားတယ် ကို Nsaboy ရေ. ကျွန်တော်တို့ ရုံးတစ်ရုံးလည်း ရွှေပုဇွန်ရှေ့က မြမာလာလမ်းထဲမှာရှိတယ်
----ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက RedLink Indoor Unit 512Kbps Silver Plan နဲ့ သွားစမ်းကြည့်တာ WiMAX Signal က ဘား နှစ်တုံးလောက်ရတယ် သုံးကြည့်တော့လည်း စက်သုံးလေးလုံးလောက်ကတော့ အေးဆေးပဲ အဲဒါနဲ့ အခုတော့ RedLink က Indoor Units လေးနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်
tJ'd bm;2wkH;udk ykdjyD; aumif;vmatmif vkyfvkdY&r,fh enf;vrf;av;rsm;&Sdao;vm;Asm..
tJ'drSm awmif bm;u2wHk;qkdawmh ,kZerSm qkd rdcsifrSawmifrdrSm tJ'gudk wpfjcm; hardware awG oHk;jyD; signal strength wufatmif vkyfvdkYrsm;&Ekdifrvm;Asm...
BH, galladino, GuruAM, honelay86, htinlinn, JoeJoule, justkidding, ko too, MNO.BN, Ni Maung, yankanar, yokesoe